Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. यिनै हुन विश्वलाई चकित पार्ने नेपाली महिला दु:खी गरीबलाई यति धेरै गरिन सहयोग, सम्मान स्वरूप एक सेयर गर्नुहोस् – Janata Live
सामाजिक सञ्जालमा निक्कै भाइरल हाथमा पैसा मुट्ठी पारेर सडक पेटीमा सुत्ने भोखा गरीबलाई सहयोग दिने बहिनी Givina magar उहाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँको यस सहयोगी मन र मानवीय परिचयको सम्मान गर्दछु।तपाईं जस्तो नारी कमै पाइन्छ संसारमा।सबैले Share गरेर उहाँको यसकालाई सम्मान गरौ*****
यो पनि पढनुहोस्, दसैं, खानपिन र कोभिड संक्रमित
चाडपर्वमा धेरैको रोजाई माछा, मासु अनि मिठाइजन्य परिकार नै हुन्छ। त्यसमा पनि चिल्लो र मसलेदार परिकारले सबैको जिब्रो लोभ्याउँछ। तर, यी खानेकुराहरू स्वास्थ्यका निम्ति फाइदाजनक मानिँदैन।
हामी अरुको घरमा पाहुनाको रुपमा जाने हो भने घरमा खाइने खानेकुरामा कटौती गर्नुपर्दछ। आज म बाहिर खानुपर्छ त्यसैले घरको खानामा कटौटी गर्छु भन्ने सोचाईको विकास गर्नुपर्छ। घरमा पनि टन्न खाने र पाहुनाको रुपमा जाँदा पनि टन्न खाने गर्नु हुँदैन।बिहान, दिउँसो, बेलुकी नै मासु मात्र खाइरहनु हुँदैन।
यो पनि पढ्नुहोस ….के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ?
तपाई पनि थाहा पाउनुहोस
काठमाडाै- कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहन मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म सबैले बुझिसके। तर, मास्क कसरी लगाउने र कस्तो लगाउने भन्नेमा धेरैलाई अन्यौल नै देखिन्छ । सबभन्दा ठूलो अन्यौल त एन–९५ मास्कले ल्यायो।
हामीकहाँ सर्जिकल मास्क वा एन–९५ मास्क दुई–तीन दिन लगातार लगाउने र धोएर फेरि प्रयोग गर्ने चलन पनि छ। के यस्तो गर्नु राम्रो हो ? यति मात्र होइन, कपडाको मास्क लगाउनु ठीक हो कि होइन र आफूलाई संक्रमण नभए पनि मास्क लगाएर हिँड्न किन जरुरी छ भन्ने अन्यौल हामीकहाँ अहिले पनि उत्तिकै छ।
यिनै प्रश्न र जिज्ञासाबारे सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर अनूप सुवेदीले गत वर्ष सांसद गगन थापासँगको फेसबुक संवादमा जवाफ दिएका थिए। मास्कबारे उनीहरूबीचको सवाल-जवाफ कोरोनाको दोस्रो लहरले गाँजेका बेला पुनः सान्दर्भिक देखिएको छ।
‘कतिपय मान्छेले एन–९५ भित्र छुट्टै सर्जिकल मास्क पनि लगाउनु हुन्छ। तर, सर्जिकल मास्क लगाएपछि अर्को लगाउनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘मास्क लगाउँदा कत्तिको टाइट फिटिङ छ भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ। माथि, तल वा छेउछाउबाट हावा छिर्ने गरी खुकुलो छ भने त्यसले संक्रमणबाट बचाउन सक्दैन।’ यस्तो अवस्थामा कपडा राखेर, टेप लगाएर वा अन्य तरिकाबाट मास्कलाई टाइट फिटिङ गराउनुपर्ने उनले सुझाए।
‘मास्क धोएर फेरि–फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?’ डा. सुवेदीले भने, ‘एन–९५ र सर्जिकल मास्क धुन मिल्दैन।’ उनले अगाडि भने, ‘यस्तो मास्क धोएपछि त्यसको छिद्रहरूमा रहेको कपडा बिग्रन्छ। भाइरस सजिलै छिर्न सक्छ।’
धुन नमिल्ने भए के आज लगाएको मास्क भोलि पनि लगाउन मिल्छ त? त्यो पनि मिल्दैन। यस्तो महामारीको समयमा मास्क लगाएर हिँड्दा त्यसको बाहिरी पत्रमा संक्रमित व्यक्तिको थुकको छिटा परेको छ भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ। त्यहाँ कोरोना भाइरस हुन सक्छ भन्ने हामीले ख्याल राख्नुपर्छ।
डा. सुवेदीको कुरा सुनेर तपाईंले पनि मास्क लगाउने तरिका थाहा पाउनुभयो होला? कतै तपाईंहरू पनि सर्जिकल मास्क वा एन–९५ मास्क धोएर त लाइरहनुभएको थिएन? वा, हरेक दिन एउटै मास्क लगाइरहनुभएको थियो कि? त्यसो गर्नुभएको थियो भने डा. सुवेदीको सुझाव अमल गर्नुस् है। (समय सान्दर्भिक भएका कारण सेतोपाटीबाट साभार गरिएकाे)
बालबालिकालाई कोरोनाबाट कसरी बचाउने, संक्रमण भइहालेमा के गर्ने ?